Times24 Nepal » रमेश प्रसाईं र प्रेम सन्जेल एकसाथ मिडियामा, हेर्नुहोस अत्यन्तै रोचक बहस (भिडियो)
रमेश प्रसाईं र प्रेम सन्जेल एकसाथ मिडियामा, हेर्नुहोस अत्यन्तै रोचक बहस (भिडियो)
रमेश प्रसाईं र प्रेम सन्जेल एकसाथ मिडियामा, हेर्नुहोस अत्यन्तै रोचक बहस ! के भन्छन् २ हस्तिहरु (भिडियो हेर्नुहोस)
हामी घुस खाँदैनौं, तपाईं घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नुहोला हजुर सावधान!
उप-सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल जहाँ – जहाँ सरुवा भएर जान्छन्, त्यस कार्यालयको गेटमा यस्तो लेखिएको पोस्टर टाँसिएको हुन्छ।
विराटनगर – ५ घर भएका प्रेम सञ्जेल ५६ वर्ष पुगे। उनले सेती अञ्चल अदालत दीपायलबाट २०३८ साल कात्तिक २८ गते सरकारी सेवा सुरू गरेका थिए। सुब्बाबाट जागिर सुरू गरेका उनी त्यसको दस वर्षपछि लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भएका थिए। अधिकृत भएपछि उनले तेह्रथुम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पहिलोपटक सेवा गरेका थिए। हाल उप-सचिव रहेका सञ्जेलले सरकारी सेवामा थुप्रै आरोह-अवरोह पार गरेका छन्। नेता, मन्त्री, सचिव र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको कानुनी / गैरकानुनी दबाब झेलेका छन्। ३७ वर्षको यो समयमा धेरै ठाउँ पोस्टिङ भए।
जता-जता गएँ भ्रष्टाचार रोक्न खोजे उनले सेतोपाटीसँग भने भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मनपरी सरुवा पाएको छु धेरै दुःख दिइएको छ। सञ्जेल निडर हक्की र पेशामा इमानदार छवि बनाएका कर्मचारी हुन्। उनी जता-जता गए केही छाप छोडेरै हिँडे।
रमेश प्रसाईं र जीवन बिष्ट
हरेक मानिस सँग फरक क्षमता हुन्छ । त्यहि क्षमता चिनेर प्रर्दशन गर्न सकियो भने सबैलाई चकित तुल्याउन सक्दोरहेछ । यस्तै फरक क्षमताका दुई युवाहरु (आरजे जोडी ) अर्थात रमेश प्रसाई र जीवन बिष्ट यी दुई युवाको अदभुत क्षमतालाई देख्ने र सुन्ने जो कोही पनि मन्त्रमुग्ध हुने गरेका छन ।
गीत लेखन,गायन,कविता,गजल लेखन लगायत क्यारिकेचर गर्न खम्पिस यो जोडीले यतिबेला राम्रै चर्चा पाएको छ । यो जोडी सुनसरीको धरानमा रहेर बिभिन्न रेडियोमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रस्तुति समेत गरिरहेको छ । यी दुवै युवा ब्रेल लिपीको सहारामा स्नातक अध्यायनरत रहेका छन तर अचम्मको कुरा राज्यले दिने कुनैपनि सेवासुबिधा उनीहरु ग्रहण गर्न चहादैनन । आफुलाई दृष्टिबिहिन भन्दा पनि फरक क्षमता भएको र अन्य ब्यत्तिभन्दा आफुहरु कुने कुरामा कम नभएको उनीहरु बताउँछन ।
केही समय अघि सोही बिद्यालयमा अध्यायनका क्रममा भेट भएका यी अल्लारे युवाहरुले संयुत्त रुपमा नाटक खेलेपनि आफुहरुको केमेष्ट्री जमेको थाहा पाएपछि दुबैको नामको पहिलो अक्षरबाट (आरजे) जोडी नामकरण गरी यात्रा थालेका रहेछन ।
संयोग पनि कस्तो नाम जस्तै उनीहरु धरानका बिभिन्न रेडियोमा आरजे कै रुपमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्छन । उनीहरु आफुहरु दृष्टिबिहिन भएपनि यो शारिरिक संरचना मात्र कमजोर भएका कारण आफुहरु अन्य ब्यत्ति भन्दा कम नभएको भन्दै राज्यको सेवासुबिधा बहिष्कार गरेको बताउँछन ।
रमेशको आँखाको संरचना नै निर्माण भएको छैन । बिश्वमा यसप्रकारका संरचना भएका मानिसहरु ५० जनामात्र भएको र नेपालमा आफुमात्र भएको उनी बताउँछन । आँखाको संरचना नै नभएपछि उनले उज्यालो देख्न पाएकै छैनन तरपनि उनी हरेक कुराहरुप्रति जानकार छन । रमेश प्रसाई पब्लिक स्पीकर सिजन २ का विजेता हुन् ।
सेतोपाटी र आर.एम.खबरको सहयोगमा ।